Xakamaynta madow ee Yurubta qadiimiga ah - Afrikhepri Fondation
Domination of madow ee Europe qadiimiga ah
Au bilowgii qarnigii 1767aad, jilbaha madow ee ka socda Afrika waxay weerareen Spain, Boortaqiiska iyo Faransiiska iyagoo hogaaminaya ciidamada Carab-Muslim ah. Awoodooda militari iyo guulahooda tirada badan waxay soo jiiteen dadka da 'dhexe qarniyadii dhexe oo naga dhaxlay tiro badan oo marag ah oo taariikhi ah jiritaankoodii taasoo dhalisay qoysas isku dhafan. Qoysas badan oo Faransiis ah ayaa leh magaca awoowe madow sida magaca qoyskooda (Moraux, Morel, Morand). Afrikani waxay ku noolaayeen Faransiiska, Spain, Talyaaniga, England iyo Boortaqiiska halkaasoo ay xoog ku maamulaan gobollada qaarkood. Waxay ku noolaayeen qalcado dhaadheer ama magaalooyin waxayna ku noolaayeen si kaamil ah bulshada. Markhaatiga Faransiiska ee loo yaqaan 'Fabre d'Olivet' (1825-XNUMX), wuxuu noo oggolaanayaa in aan qadarinno aragtida ay leeyihiin dadka Madowga Yurub ee Yurub: “Ragga cadaanka ahi waxay arkeen markii ugu horraysay, marka loo eego kaymaha gubtay, ragga midab ka duwan kuwa ay leeyihiin. laakiin farqigaasi kaligood kuma uusan darin. Nimankan, ayaa ku lebbisan dhar aan caadi ahayn iyo nalal jilicsan, oo si farshaxan hub culus u adeegsaday, oo aan la garaneyn gobolladaas. Waxay haysteen ciidan fara badan; Waxay ku dagaallamayeen taangiyo iyo xitaa on munaasibado dhaadheer oo horumarsan sida colossi, geerida dhinac walba ka dishay. Dhaqdhaqaaqa koowaad wuxuu ahaa doqon. Haweenka qaarkood ee caddaanka ah, oo ay shisheeyayaashani qabsadeen oo ay damceen inay qabtaan naxariis, ma ahayn wax adag in la khiyaaneeyo. Aad ayey ugu faraxsanaayeen waddankoodii hooyo jacayl nafaqo leh. ”
Markhaatiyada kale ee taariikhyahanada, lasocda qodobbada sheekada adigoo bixinaya macluumaad dheeri ah: ”The Whites ayaa hadda ka toosay weeraradii madaw ee bilaabay inay ku galaan koonfurta Yurub. Halganka aan hore loo aqoonin ayaa ugu horeeya.Dab cad, badh-bad baadin ah, oo ka soo baxaya kaymahooda iyo hoygooda harada, ma haystaan ​​ilo kale oo aan ahayn qaansooyinkooda, warmo iyo fallaadho leh dhagxan-dhagax.
Madow waxay lahaan jireen hubka birta, hubka naxaasta ah, dhammaan ilihii ilbaxnimo warshadeed iyo magaalooyinkoodii Cyclopean. Burburkii naxdinta (()) Badbaadinta dadka cadcadka, waxay ahayd duudkoodii oo ay sida dugaagga duurjoogta ah ay u qarin karaan inay dib ugu laabtaan waqtiga saxda ah ”
Kacdoonkan Carab-Muslim iyo Madow (Moor / Saracen) wuxuu u oggolaaday Yurub inay ogaato cilmi aan tiro lahayn oo saynis ah oo loo yaqaan markaa markaas Bariga, Afrika iyo Aasiya markii ay gashay habeen mugdi ah oo milicsiga. caqli badan (kadib dhicitaankii Rome).
Siraha qarsoon ee qoryaha xashiishka, daawada, xisaabta, cilmiga xiddigiska, duulista, qoraalka Griiga, iwm ..., Yurub waxaa ku leh iyaga ku guuleystayaashaas. Jaamacadihii ugu horreeyay ee Yurub waxaa sidoo kale aas aasay dadkani… [wpdiscuz-feedback id = ”p1c8j946dt” su’aal = ”Maxaad u maleyneysaa?” furay = ”0 ″] [/ wpdiscuz-celin]
Asal ahaan Afrikaanka mamnuucida cunidda hilibka doofaarka